Manaova asa-tanana amin'ny ankizy - hevitra momba ny asa-tanana manomboka amin'ny koba masira ka hatramin'ny famantarana ny varavarana
Pejy bebe kokoa misy hevitra momba ny asa tanana ho an'ny ankizy
Ny fanaovana asa tanana dia tsy vitan'ny ankizy ihany fa mahafinaritra fa ho an'ny ray aman-dreny koa. Fa mila hevitra mitombina. Ny asa-tanana arakaraka ny vanim-potoana dia manome antoka ihany koa fa ny tranonao manokana dia voaravaka kanto foana amin'ny zavatra vita an-trano.
Asa tanana miaraka amin'ny ankizy arakaraka ny vanim-potoana
Amin'ny lohataona dia afaka mivoaka indray ianao amin'ny farany ary te-handroaka ny toe-piainan'ny ririnina manjombona amin'ny eritreritra vitsivitsy momba ny asa-tanana. Satria efa leo ririnina ihany ianao amin'ny farany ary ny ankizy tsy mila zavatra hafa ankoatry ny milalao natiora indray.
Asa tanana miaraka amin'ny ankizy - © Robert Kneschke / Adobe Stock
Raha tsy mandeha mandritra ny tontolo andro izany dia azonao atao farafaharatsiny avelao hifindra ao amin'ny rindrinao efatra miaraka amin'ny loko, voninkazo ary vorona falifaly ny lohataona.
Miverina amin'ny lohataona ireo vorona. Ampahatsiahivo miaraka amin'ny afisy vorona izy ireo. Mba hanaovana izany dia makà taratasy fotsy fotsy lehibe, lokoo manga, ohatra (ho an'ny lanitra), ary ahinjiro eo ambonin'ilay lamba ilay tsipika lamba maromaro. Mamorona vorona tsara tarehy miaraka amin'ny zanakao, ohatra amin'ny baoritra na tsapa. Mazava ho azy fa afaka misarika tarehy ny ankizy kely.
Asa-tanana amin'ny fahavaratra
Fahavaratra, masoandro, morontsiraka ary ranomasina - iza no tsy miandrandra izany fotoanan'ny taona sy fialan-tsasatry ny mpianakavy izany?
Raha mbola miala sasatra kely ny fialantsasatrao dia ento fotsiny ny morontsiraka sy ny ranomasina. Mba hanaovana izany dia makà siny fitaratra lehibe (vilia baolina, aquarium na lantern efa tsy ampiasaina) ary fenoy fasika izany. Azonao atao ny manamboatra hazo rofia, seza tokana ary voanio tsara tarehy amin'ny taratasy fananganana. Ny zana-kazo sy ny fahatsiarovana hafa tamin'ny fialan-tsasatra nataonao farany dia manana toerana voninahitra ihany koa. Azonao atao ny mieritreritra bebe kokoa ny handravaka ny torapasika any an-trano miaraka amin'ny zanakao.
Asa-tanana amin'ny fararano
Rehefa mihalava ny andro dia mihalasa loko kokoa ilay ala. Angony ravina tsara tarehy, tsorakazo tsara tarehy, hazelnut, chestnuts sy izay rehetra atolotry ny natiora amin'ny zanakao. Miaraka amin'ny zanakao dia afaka manamboatra endrika kely ianao na fararano amin'ny fararano amin'ny akora voajanahary hita. Raha tsindrio ao anaty boky ny ravina dia hijanona ho tsara tarehy mandritra ny fotoana maharitra ny asa-tanana.
Asa-tanana amin'ny ririnina
Koa satria ny toetr'andro dia mitazona antsika ho lava sy lava kokoa ao anaty trano, fotoana tokony hiantohana ny haingon-trano tsara ihany koa amin'ity vanim-potoana ity. Manangona volon'ondry fotsy vitsivitsy, baoritra vitsivitsy ary taratasy kely tsapa na fananganana. Satria na dia tsy oram-panala aza dia afaka manao snowmen pompom kely isika nefa tsy misy ezaka be. Hetezo fotsiny ny boribory boribory roa avy amin'ny baoritra ary manaova lavaka eo afovoany. Ireo faribolana roa dia tokony hitovy tanteraka. Satria izy ireo dia mpitazona pompom. Fehezo amin'ny kasety fotsy izy izao ary esory ny pompom eo anelanelan'ny modely. Afatory amin'ny ribony aho, azafady. Ankehitriny ianao dia afaka mitafy sy mandravaka ny snowman amin'ny baoritra na tsapa.
Ny fikajiana araka ny vanim-potoana dia manome endrika vaovao hatrany hatrany ny tranonao.
Ny tsindry eo amin'ny rohy iray dia manokatra ny pejy miaraka amin'ny hevitra momba ny asa-tanana:
Manaova sachets manitra
Arotsaho labozia ny tenanao
Mamolavola lohan'ny cress
Manaova konina sekoly anao manokana
Taratasy fanapahana motera mpamono afo
Famantarana varavarana Tinker ho an'ny akanin-jaza
Volavola miaraka amin'ny koba masira
Trano taratasy fanaovana tinker
Mamorona zaridaina ahitra ho an'ny ankizy
Manaova kibay amin'ny andro fahavaratra anao
Mandoko amin'ny famoronana tsy misy pejy fandokoana
Manjaitra ho an'ny vao manomboka sy amin'ny ankizy
Mampiroborobo ny famoronana amin'ny ankapobeny
Manana torohevitra ve ianao, hevitra fanampiny momba ny lalao? Sa fanontaniana, tolo-kevitra ankapobeny sa fanakianana? Aza misalasala mifandray aminay!